နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်ကဘယ်လို | ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များအဘို့သတင်းအချက်အလက် | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
သငျသညျနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခင်မှာ, သငျသညျအထဲကရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်: သင်တစ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာမှအရည်အချင်းပြည့်မီ?
သငျသညျနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခင်မှာ, သင်ရထိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်သေချာအောင်သင့်တယ်. နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက်, သငျသညျတွေ့ကြံယေဘုယျအားရပါမည် t ကိုသူလိုအပ်ချက်များကိုအောက်ပါ:
လူအများစုများအတွက်, သင်တစ်ဦးနေထိုင်သူအဖြစ်အနည်းဆုံးငါးနှစ်ကြာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်ခဲ့ကြရမည်ဖြစ်သည်. သို့သော်, သင်၏လင်သို့မဟုတ်မယားနိုင်ငံသားပါလျှင်, သငျသညျသုံးနှစ်လွန်ပြီးမှလျှောက်ထားနိုင်မည်အကြောင်း.
အကြောင်းပို Read အိမ်ထောင်ဖက်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီ
သင်တို့သည်နောက်အဓိကရာဇဝတ်ကောင်လှုပ်ရှားမှုရှိရမည်. တစ်ဦးအသွားအလာလက်မှတ်တူသောအသေးစားပြစ်မှုများအဆင်ပြေများမှာ, သင်မူကားမဆိုအဓိကပြစ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားမရနိုင်. အများဆုံးသေးငယ်တဲ့ပြစ်မှုအဆင်ပြေကြောင့်သင်မူကားသင်၏လျှောက်လွှာအပေါ်မုသာမပါလျှင်အမြဲတမ်းဒီအကြောင်းရိုးရိုးသားသားဖြစ်, ဒီသင်၏လျှောက်လွှာကိုငြင်းပယ်ရစေနိုင်သည်. သင်ပင်ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရစေခြင်းငှါ,. သင်တစ်ဦးရာဇဝတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ကြပါလျှင်, ရှေ့နေပြောပြရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်က. သူတို့ကသငျသညျအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိစေမည်.
သင်ဖတ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်, ရေးသား, အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်နဲ့နားထောင်ရန်. မသန်စွမ်းလူဦးသို့မဟုတ်လူတို့အဘို့အခြို့သောချွင်းချက်ရှိပါတယ်ကျော်ရှိပါတယ် 50 အချိန်ကြာမြင့်စွာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်ခဲ့ကြသူ.
နှောင်ကြိုးများကို: D အတွက်အသက်အနှစ်အဟောင်းတွေနဲ့ disabled လူများအတွက်ချွင်းချက်အကြောင်းကို Read
နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားအလွန်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်. ဖြစ်နိုင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ရှေ့နေအကူအညီနဲ့သင်ရှိသည်အကြံပြု.
1. ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းပုံစံဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်ပါသည် N-400. သငျသညျအပလီကေးနှင့်အတူအများအပြားစာတမ်းများထည့်သွင်းရန်ရှိသည်နှင့်သင်ကိုလည်းအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သင်လိုအပ်သောအရာတို့ကိုရန်လင့်ခ် သင်သည်သင်၏ N-400 application ကိုမေးလ်သည့်အခါထည့်သွင်းရန်. သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဓါတ်ပုံပါဝင်သည်ရန်ရှိသည်. ဤဓါတ်ပုံများကို၏နောက်ကျောအပေါ်သင်၏ "A-number ကို" ရေးသားဖို့ကိုသတိရပါ. သင်အခကြေးငွေပေးဆောင်စရာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်တချို့လူတွေကတစ်ဦးအခကြေးငွေစွန့်လွှတ်ဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. သင်တစ်ဦးရှေ့နေမရှိဘဲသင်၏စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်နေတယ်ဆိုရင်, အခမဲ့က်ဘ်ဆိုက် CitizenshipWorks.org သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်ကူညီပေးပါမည်. သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများရှိပါကသူတို့ကကြည့်ဖို့ကပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်.
2. သငျသညျ USCIS သင်၏လျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိပြောပါတယ်ကြောင်းငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏စာတစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်. ဒီသိမ်းဆည်းထားပါနှင့် 13-ဂဏန်းငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းအရေအတွက်အားချရေးပါ. သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်ရှိငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏ဓာတ်ပုံကို ယူ. သင်ကဆုံးရှုံးကြဘူးသေချာစေရန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကအီးမေးလ်ပို့. သင်ကစစ်ဆေးနိုင်ရန်လက်ခံရရှိအရေအတွက်ကသုံးနိုငျ အဆိုပါ USCIS က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏လျှောက်လွှာ၏ status ကို.
နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားများသောအားဖြင့်ကုန်ကျ $725. သင်တစ်ဦးအခကြေးငွေစွန့်လွှတ်ရနိုင်မည်အကြောင်း. တစ်ဦးကစွန့်လွှတ်သငျသညျဆပ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်မည်ဟုဆိုလိုသည်. ဒါဟာသင်လုပ်ဘယ်လောက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်အဘယ်မှာသငျသညျအသကျရှငျ.
3. သင့် biometric စိစစ်ဖြည့်စွက်. ဒါကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအခြို့သောနေ့ရက်နှင့်အချိန်မှာရုံးကိုသွားတောင်းပါလိမ့်မယ်. ဒီချိန်းသွားပါရန်နှင့်အချိန်မီရောက်ရှိစေရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ! ခန့်အပ်မှာပါ, သူတို့သည်သင်၏လက်ဗွေယူပါလိမ့်မယ်. ဤသည်မှာသူတို့သည်သင်၏လက်ဗွေကိုချေမှုန်းပစ်ဖို့နဲ့သေချာသင်တစ်ဦးပြစ်မှုဆိုင်ရာမဟုတ်စေတဲ့စနစ်မှတစ်ဆင့်ပုံကို run ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ်.
4. တစ်ဦးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိနှင့်အင်တာဗျူးတွင်ဖြည့်စွက်. ယင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ Nature အင်တာဗျူး.
5. သင်တို့သည်လည်းအမေရိကန်သမိုင်းနှင့်အစိုးရအပေါ်တစ်ဦးနိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များစာမေးပွဲတွင်ယူရပါလိမ့်မယ်. ဒီစာမေးပွဲတွင်, သငျသညျဖြေဆိုရပါမည်6ထဲက 10 မှန်ကန်စွာအမေရိကန်နိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို, သမိုင်းနှင့်အစိုးရ. သင်တို့သည်ငါတို့၏ယူနိုင်ပါသည် နိုင်ငံသားအဖြစ်အလေ့အကျင့်ပဟေဠိ သင်စာမေးပွဲဖြေဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီလျှင်ကြည့်ဖို့. သငျသညျအဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ join လို့ရပါတယ် အခမဲ့နိုင်ငံသားလူတန်းစား စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့သင့်ပြင်ဆင်ထားရန်.
6. သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်. USCIS ထံမှရေးသားထားသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူး၏နေ့ပေါ်တွင်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်သင်နောက်ပိုင်းတွင်မေးလ်ထဲမှာခံယူစေခြင်းငှါ,. သင့် application ခဲ့လျှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောပါလိမ့်မည်:
ဆက် (ဒီ USCIS သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုသုတေသနလုပ်နေတယ်ဆိုလိုတယ်သို့မဟုတ်ပါကသင် English သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များစာမေးပွဲကျရှုံးခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ်. သငျသညျတဖနျသူတို့ကိုယူနိုင်ပါတယ်။)
ငြင်းပယ် (ဒီ USCIS သငျသညျသဘာဝအရည်အချင်းပြည့်မီမဟုတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဆိုလိုတယ်. ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, သငျသညျအယူခံလွှာတင်ရေးနိုင်ပေမည်။)
သငျသညျဖြတ်သန်းခဲ့တယျလိုလျှင်, သင်သည်သင်၏နိုင်ငံသားအဖြစ်အခမ်းအနားပြီးမြောက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နှင့်သစ္စာ၏အကြိနျယူဦးမည်. ဤသူသည်သင်တို့ကို USA မှသစ္စာရှိမှုအပေါင်ဆိုလိုတယ်.
သငျသညျထိုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများရှိပါက, သငျသညျခေါ်နိုင်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းကရှိပါတယ်. အချို့မျက်နှာသစ်ဘာသာစကားများတွင်ဤအဖွဲ့အစည်းကိုကမျးလှမျးခကျြအကွံဉာဏျ.
ငါတို့သည်ဤနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသင်၏မေးခွန်းကိုဖြေကကူညီပေးခဲ့မျှော်လင့်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်ပြင်ဆင်မှုအတန်းကိုယူဖို့အောက်က sign up ပြုလုပ်. သင်အွန်လိုင်းကသူတို့ကိုယူနိုင်ပါသည်, ဘယ်နေရာမှာမဆို, အချိန်မရွေး!